April 1, 2021 - Padaethar
April 1, 2021 by Padaethar
ယောကျာ်းလေးတိုင်း တကယ်ချစ်တဲ့ ချစ်သူအပေါ် ဘယ်တော့မှ မလုပ်တတ်တဲ့အရာများ
သင့်ချစ်သူ ဖောက်ပြန်နေကြောင်း သေချာနေပြီဖြစ်တဲ့ လက္ခဏာ (၃) ခု
အဝေးမှာရှိတဲ့သင့်ချစ်သူ ဖောက်ပြန်နေကြောင်း သေချာနေပြီဖြစ်တဲ့ လက္ခဏာ (၃) ခု…. Long distance relationship ဆိုတဲ့ relationship မျိုးဟာ တကယ်တမ်းတော့ မြဲဖို့သိပ်ကို ခက်ခဲလွန်းလှပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လည်း မတွေ့ရဘဲ ဖုန်းထဲကတစ်ဆင့် အသံလေးပဲကြား၊ ရုပ်ကလေးပဲမြင်ရတဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုးဆိုတော့ LDRS တွေကြားထဲ ယုံကြည်မှုတွေ၊ နားလည်မှုတွေဟာ သာမန်အတွဲတွေထက် အများကြီးပိုလိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့တွေအစိုးရိမ်ဆုံးကတော့ အနေနီးတဲ့လူအပေါ် စိတ်ယိုင်သွားမှာကိုပါပဲ။ ဒီတော့ သင့်ရဲ့ အဝေးရောက်ချစ်သူဟာ ဖေက်ပြန်နေပြီလားဆိုတာ ဒီအချက် (၃) ချက်တည်းနဲ့ စမ်းစစ်လိုက်ပါ။ ( 1 )သင့်ကိုရှောင်ဖယ်နေပြီ မအားလို့၊ ပင်ပမ်းလို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ပေါင်းစုံနဲ့ သင့်ကို ကိုင်ပေါက်ပါတော့မယ်။ အရင်လည်း ဒီလိုပဲ ရတဲ့အချိန်လေး စကားပြောနေကျကို အခုမှ ကောက်ခါကငင်ပကာ ထဖြစ်လာတာမျိုးပေါ့။ နောက် သင်နဲ့ … Read more
ချစ်သူကောင်လေးဆီကနေ တကယ်အလိုချင်တဲ့ အရာများ
ခဈြသူကောငျလေးဆီကနေ တကယျအလိုခငျြတဲ့ အရာမြား ဒီနေ့ ပွောပွပေးခငျြတာက ခဈြသူ ကောငျမလေးက ကောငျလေးဆီကနေ ဘာတှေ တကယျလိုခငျြတာလဲဆိုတဲ့ကိစ်စပါဘဲ။ ဒါကို ရညျးစားရှိတဲ့ ကောငျမလေးတှေ အကွှငျးမယျ့ လကျခံမယျလို့လညျး ယုံကွညျပါတယျ။ ကောငျလေးတှေ ဘကျက လညျး သိရှိနားလညျလိမျ့မယျလို့ ယုံပါတယျ။ ဒီနညျးနဲ့ ပြျောရှငျတဲ့အခဈြကမ်ဘာလေးတှေ တိုးပှားလာစဖေို့ ရညျရှယျပါတယျ။ စိတျနှဈကိုယျနှဈ အခဈြစဈ အမြိုးသမီးတှေ တမျးတတဲ့ အခဈြကတော့ သူ့ကိုလညျး ကိုယျက တကယျခဈြတယျ၊ သူကလညျး ကိုယျ့ကို တကယျ ခဈြတယျ။ အဲဒီလို နှဈနှဈကာကာ အခဈြမြိုးကိုသာ လိုခငျြကွပါတယျ။ အပြျောရှာတာလား၊ နောကျတဈယောကျနဲ့ ဖောကျ ပွနျနသေလားဆိုတာ အမြိုးသမီးတှေ အမွဲစိတျပူနရေတဲ့ အရာပါဘဲ။ အံ့သွဝမျးသာစမေယျ့ လကျဆောငျ ထငျမှတျမထားတဲ့ အခြိနျမြိုးမှာ လကျဆောငျပစ်စညျးတဈခုခု ပေးတာမြိုးကို အမြိုးသမီးတှေ … Read more
တကယ်ချစ်တဲ့ယောက်ျား နဲ့ ဟန်ဆောင်တတ်တဲ့ယောက်ျား မိန်းခလေး တယောက်က သူ့ချစ်သူ ကောင်လေးနဲ့6နှစ် အကြာ လက်တွဲ ခဲ့တယ် ။ ဒါပေမဲ့ ချစ်သူကောင်လေးက သူမကို လက်ထပ်ယူဖို့ စိတ်ကူး မရှိခဲ့ဘူး ။ အဲဒါကြောင့် ဒီ6နှစ် ကြာ အချစ်ဇာတ်လမ်း ကို သူမ ဖြတ်တောက်ပြစ်ဖို့ ရွေးချယ် လိုက်တယ် ။ သူမရဲ့ အခုလက်ရှိ လင်ယောက်ျားကို အိမ်ထောင်ဖက် တွေ့တဲ့ အနေနဲ့ စတွေ့တဲ့ အချိန်တုန်းက သူမ အိမ်ထောင်ပြုချင်ပြီလို့ ပြောခဲ့တယ် ။ သူမရဲ့ ယောက်ျားက တချက်ပြုံးသွားတယ် ။ အတူတူ ထမင်း စားခဲ့ကြပြီး ပျော်ရွှင်စွာ စကားတွေ ပြောခဲ့ကြတယ် ။ … Read more
သူက သင့်ကိုအပြောနဲ့မဟုတ် လက်တွေ့ကျကျ ချစ်တယ်ဆိုတာ သိနိုင်တဲ့ အချက် (၆)ချက်
သူက သငျ့ကိုအပွောနဲ့မဟုတျ လကျတှကေ့ကြ ခဈြတယျဆိုတာ သိနိုငျတဲ့ အခကျြ (၆)ခကျြ လူတဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အခဈြကို ခံစားပုံခငျြးမတူသလို၊ ဖျောထုတျပုံခငျြးလညျး မတူပါဘူး။ တခြို့က အခဈြကိုအပွောနဲ့ဖျောထုတျပွသတယျ၊ တခြို့ကတြော့လညျး အပွောနဲ့မဟုတျ လကျတှကေ့ကြ သကျသပွေတယျ။ သငျ့ခဈြသူက သငျ့ကို အပွောနဲ့မဟုတျဘဲ လကျတှကေ့ကြ ခဈြတတျတဲ့သူ၊ အခဈြကို လုပျရပျနဲ့ သကျသပွေတဲ့သူဆိုတာ ဒီအခကျြတှကေသကျသပေါပဲ။ (၁) နဖူးကိုနမျးတတျတယျ သူက သငျ့ရဲ့နဖူးလေးကို နမျးတတျတဲ့ အကငျြ့ရှိရငျ သငျဟာသူ့အတှကျ တနျဖိုးထားပွီးခဈြရတဲ့သူ၊ သူ့တဈဘဝလုံးနှေးထှေးမှုတှပေေးခငျြတဲ့သူလို့ အဓိပ်ပါယျရပါတယျ (၂) လကျဆောငျလေးတှပေေးတတျတယျ သငျ့အကွိုကျတှကေို မှတျထားပွီး လကျဆောငျလေးတှပေေးတတျတယျ။ အထိမျးအမှတျနတှေ့မှေမဟုတျဘဲ သငျ့ကိုပြျောစခေငျြလို့ လကျဆောငျပေးတာမြိုးလေးတှပေေါ့။ (၃) သူ့သူငယျခငျြး၊ မိတျဆှတှေနေဲ့ရငျးနှီးစတေယျ သူ့အသိုငျးအဝိုငျး၊ မိတျဆှသေူငယျခငျြးတှနေဲ့ မိတျဆကျပေးရုံမက သူတို့တှေ သငျ့အပျေါမှာ ခငျမငျရငျးနှီးအောငျ၊ … Read more
ချစ်သူရဲ့တန်ဖိုးထားမှုကို အမြဲတမ်းရရှိချင်ရင် ဒီအချက်လေးတွေကို လိုက်နာပါ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အဖို့ ချစ်သူရဲ့ဂရုစိုက်တန်ဖိုးထားမှုကို အမြဲရရှိနေမှ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အချစ်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်ရတာပါ။ဒီလိုမျိုး ချစ်သူရဲ့ဂရုစိုက်တန်ဖိုးထားမှုကို အမြဲရရှိချင်တယ်ဆိုရင်တော့…. မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်ရမယ့် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် အချက်လေးတွေ ရှိပါတယ်။ဒီအချက်လေးတွေကိုသာ လိုက်နာမယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာချစ်သူအတွက်တန်ဖိုးရှိပြီး လေးစားစရာကောင်းတဲ့ သူတစ်ယောက် ဖြစ်လာမှာပါ။ (၁) ကိုယ့်ဘဝကိုယ် မရှက်ပါနဲ့ သင်ဟာ ပညာတတ်တစ်ယောက်မဟုတ်လို့၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာ မချမ်းသာလို့၊ ဒါမှမဟုတ် အားနည်းချက်တွေများလို့ ကိုယ့်ဘဝကို မရှက်ပါနဲ့၊ ဖုံးကွယ်ဖို့လည်း မကြိုးစားပါနဲ့။အရှိကိုအရှိတိုင်း လက်ခံပြီး ဘဝကိုအကောင်းမြင်စိတ်ထားပါ။ ဒါဟာ စိတ်ထားမွန်မြတ်ခြင်းဖြစ်တာကြောင့် သင့်ချစ်သူဟာ သင့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ ခံယူချက်ကို တွေ့မြင်ပြီး လေးစားတန်ဖိုးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ (၂) ကိုယ့်ကျင့်တရား စောင့်ထိန်းပါ ဒီကိစ္စကတော့ အရေးကြီးဆုံးပါပဲ။ သင့်ချစ်သူနဲ့သင်ဟာ လူမမြင်ကွယ်ရာရောက်နေလည်း စောင့်ထိန်းသင့်တာကိုတော့ စောင့်ထိန်းရမှာပါ။သင့်ချစ်သူရဲ့ တန်ဖိုးထားလေးစားမှုကို ခံချင်ရင်တော့ … Read more